Njem Phuket | Akụkọ Njem
Mariela Carril | | Ihe ị ga-ahụ, Tailandia
Oge 2020 a dị oke egwu agafeela. Anyị nwere ike ịmalite inwe olile anya na anyị ga-ahapụ ọrịa ahụ n'azu na n'oge ụfọdụ n'ọdịnihu anyị ga-enwe ike ịgagharị na udo ọzọ. Ma mgbe ọ dị ka nke ahụ, olee maka Phuket?
Phuket bụ pel nke thailand. Ihe kacha mma ma ọ bụrụ na ịchọrọ osimiri, paradaịs, izu ike na ikuku mba ụwa. Mgbe oria ojoo a dakwasiri Phuket ka ga ano ebe a ma nabata anyi nke oma.
Ọ bụ mpaghara nke Thailand, nke dị na ndịda si na mba. Ọ bụkwa Agwaetiti kacha ibu na Thailand na Oke Osimiri Andaman. Nwere ezigbo mmetụta ChinaYabụ enwere ọtụtụ ụlọ arụsị na ebe nri dị na China ebe niile. O nwedịrị oge a na-eme ememme ndị anaghị eri anụ a na-eme na China n’afọ otu ugboro n’afọ, na-emekwa ka ndị obodo ha na-ewu ewu na-ewu ewu.
Agwaetiti Pghuket o nwere ọtụtụ osimiri mara mma, gụnyere Karon, Kamala, Kata Noi, Patong ma ọ bụ Mai Khao, na ikekwe ebe kachasị mma iji hụ ọdịda anyanwụ na ụwa: Laerm Phromthep. Ma, ọ bụghị ihe niile bụ osimiri n'akụkụ ebe a, e nwekwara ọtụtụ ndụ abalị na ụzọ gasị akụkọ ihe mere eme na-agba gị ume ịmata oge gara aga ha.
Ya mere, ka na-amalite na Old Phuket, obodo ochieỌ dị mma maka ịgagharị na ịmara obodo ahụ na ndị bi na ya, ndị Thais, ndị China, ndị Europe na ndị Alakụba ahọrọla ibi ebe a. Na ihe owuwu Ọ bụ n'ọtụtụ okwu ndị China - Portuguese, n'akụkụ abụọ nke okporo ụzọ ahụ, ha dịkwa ọmarịcha nke na ụfọdụ agbanweela ka ọ bụrụ ebe ngosi ihe mgbe ochie ma ọ bụ ụlọ nri ma ọ bụ ụlọ ahịa ma ọ bụ ebe obibi. Dịka ọmụmaatụ, gaa na Phuket Thai Hua Museum.
Ọ bụ n'okporo ámá nke ebe akụkọ ihe mere eme ka ị nwere ike ịnụ ụtọ nri mpaghara, were foto nke ndị bi ebe ahụ ma ghọta ọdịbendị. Ọ bụrụ n ’ịnọ n’ụbọchị Sọnde, ị ga-enwe ọ enjoyụ n’ahịa okporo ámá, Lat Yai, dị mma iji nwaa ụdị nri niile.
Hapụ Old Phuket n'èzí ụzọ na-aga n'ebe ndịda. Ko Racha nwere agwaetiti abụọ, Ko Racha Noi na Ko Racha Yai. Ha abụọ dị mma ọcha aja osimiri na kristal doro anya mmiri ezigbo mma maka mmiri. Akwadoro Ko Racha Yai na akụrụngwa niile, mana Ko Racha Noi kachasị mma maka ndakpu mmiri na n'eziokwu, ọ bụ naanị busos ndị ọkachamara ka enyere ikike maka enwere stingrays na shark ọcha.
N'aka nke ozo bu obere agwaetiti Ko Mai Thon, ndịda ọwụwa anyanwụ nke Phuket, naanị kilomita iri na ise, nwere ụsọ osimiri mara mma karị. Ndị njem na-enweghị obere oge na-agafe ebe a n'ihi na ụgbọ mmiri na-ebute ya ngwa ngwa. Osimiri ọzọ dị jụụ bụ Okpu Patong. Ọ bụ na a curvilinear n'ọnụ mmiri na-acha ọcha ájá na-ekwe omume nke na-eme ihe niile njem nleta mmiri egwuregwu. N'otu oge ahụ enwere obere obodo gbara ya gburugburu, kwadebere nke ọma n'ọnọdụ ọ bụla nwere ụlọ ahịa, ụlọ ọgwụ, ụlọ nri na ụlọ oriri na ọ hotelsụ hotelsụ.
Okpu Nai Yang bụ osimiri ọzọ, nke dị na Sirinath National Park na ubi osisi mara mma nke mara nma. Okirikiri coral gbara ya gburugburu ma nwee ọtụtụ ndụ mmiri, ọkachasị mbe mbe nke na-abịa site na Nọvemba rue Febụwarị. Enwekwara ụgbọ ala a, n'okporo ụzọ, site na Phuket, na-ahapụ obodo Thalang n'azụ. N'akụkụ aka nke ọzọ, Okpu okpu Ọ bụ obere osimiri dị n'okpuru ụkwụ ugwu ejiri osisi pine kpuchie nke bụrụbu ebe golf maka King Rama VII.
Osimiri dị larịị ma na mmiri ozuzo, ebili mmiri na-esi ezigbo ike ka ị ghara igwu mmiri. Osimiri dị 24 kilomita site na obodo Phuket. Osimiri ọzọ dị jụụ ma dị ọcha bụ Okpu okpu, Laem Sing, ya na akuku na osisi nke na-enye ndo. ọ bụ naanị 1 kilomita si okpu Surin, n'ebe ndịda. Nke ahụ bụ, na oke osimiri dị na Phuket, ihe bụ isi bụ ịnụ ụtọ anyanwụ, oke osimiri na ihe ndị a na-eme n'ụsọ osimiri: ịkwọ ụgbọ mmiri, ndakpu mmiri, ikuku mmiri, ikuku ikuku, wdg.
Anyị kwurịtara na mmalite banyere otu n'ime ebe kachasị mma n'ụwa iji lelee ọdịda anyanwụ: Laem Phromthep. Ọ bụ ebe ndịda agwaetiti, akwa, dị mma maka ịse foto. Site na nsọtụ ugwu ahụ ị nwere ike ịhụ ahịrị nkwụ nke na-adabere n'elu abyss ahụ, enwere nkume dị n'oké osimiri ma gafee ya dị agwaetiti Ko Kae Phitsadan. Enwere ụlọ ọkụ Ọzọkwa, wuru na Golden Jubilee nke King Rama IX, na site na ebe ahụ ruru 39 kilomita.
Ọzọ iconic Phuket saịtị, gara niile njem nleta, bụ Ulo Wat Chalong, ụlọ arụsị akụkọ ihe mere eme na-echetara ọnụ ọgụgụ nke onye mọnk, Luangpho Chaem nke Wat Chalong, bụ nna ukwu nke ntụgharị uche Vipassana na ọgwụ ọdịnala. E nyere ya ọkwa nke ụka site n'aka Eze Rama nke V na ihe ndị a na-ere ebe a, ọtụmọkpọ, kwenyere na ọ na-eweta nchebe na ọgaranya. Ebe ọzọ a na-apụghị izere ezere bụ Buda Buda Buda, n'ugwu, na-etinye.
Oge dị mma iji gaa Phuket, ọ bụrụ n'ịchọrọ oriri na nkwari, ọ bụ gaa maka Afọ Ọhụrụ Phuket nke China, ozugbo Chinese Afọ Ọhụrụ. Ebumnuche nke ememme a nke abụọ bụ iji gosipụta ndụ obodo ahụ ma nye ndị njem nnukwu ahụmịhe ka ọtụtụ okporo ụzọ nke ebe akụkọ ihe mere eme na-emechibido ụgbọ ala wee bụrụ ndị na-agagharị agagharị.
Enwere yi parades, ndị mmadụ na-eyi uwe ọdịnala, ngosipụta nri, ebe a na-ere nri ebe niile na ihe ndị ọzọ. Lastbọchị ikpeazu bụ ụbọchị Ekpere, otu ọdịnala ochie nke obodo.
Gbaso ebili mmiri nke ihe omume na ọtụtụ ndị mmadụ na Phuket bụ Ogige Park Phuket Fantasea, ihe nkiri raara nye omenala Thai. Ihe kachasị mma na nke a bụ arụmọrụ akpọrọ Kamala dị ịtụnanya, ngwakọta nke Thai na ọdịbendị nwere mmetụta nke ụda, ọkụ na egwu na ihe karịrị enyí 10 na anụmanụ ndị ọzọ na nnukwu ogbo. A na-enye nri kọlọtọ ma enwerekwa ụlọ ahịa ebe nchekwa. Ọ na-emepe ụbọchị ọ bụla ma e wezụga Tọzdee, site na 5: 30 ruo 11: 30.
Ruo ugbu a, nyochaa banyere ịma mma nke Phuket, mana tupu anyị emechaa, anyị ga-ahapụ ụfọdụ Atụmatụ maka njem na Phuket:
. Osimiri ndị dị n'ụsọ oké osimiri ndịda bụ ebe kachasị ọnụ ọgụgụ, ebe ndị nọ na ugwu dị jụụ ma nwee mmadụ ole na ole. Ndị otu a nọ na ndịda.
. Osimiri buru ibu (Kata, Karon, Nai Han, Patong, Nai Han, Nai Yang, Mai Khao), nwere akụrụngwa na akụrụngwa maka imi mmiri, ikuku ikuku na njem ụgbọ mmiri.
. Phuket bụ ebe mara mma dị mma, ọbụlagodi n'abalị.
. Nwere ike ịgagharị na obodo ahụ site na tuk-tuk, enwere tagzi, bọs, ọgba tum tum na ụgbọ ala. Ndị tuk-tuks ebe a adịghị ka ndị nke Bangkok, mana ha nwere wiil 4 ma na-acha uhie uhie ma ọ bụ edo edo. Esgbọ ala, Phuket Smart Bus, na-esi n'ụsọ osimiri gaa n'akụkụ osimiri, na site n'ọdụ ụgbọ elu, ma dị mfe. Na-azụta oke bekee Kaadị n'elu ụlọ ma ọ bụ na ụlọ ahịa na ọ bụ ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » njem » Ihe ị ga-ahụ » Phuket njem
Ihe ị ga-ahụ na Baiona, Galicia
Ihe ị ga-ahụ na Santo Domingo